KPET DR6500 Vet inkqubo yedijithali ray X ray umfanekiso izixhobo DR pet lwezilwanyana isilwanyana - China HD Medical Technology
KPET DR6500 Vet pet lwezilwanyana isilwanyana yedijithali ray X inkqubo ray izixhobo DR
uyilo Umgangatho angaphezulu ebhedini kuluhlu olubanzi sicelo ifanele uhlolo kuzo zonke izilwanyana amancinane, aphakathi kunye enkulu. Izinto edityanisiweyo eliphezulu-zobugcisa zisetyenziselwa komhlaba ngqengqelo izinto empahla ekuqaleni-ukumelana kwaye kulula ukuyicoca. Esithathwa ukufunxa X-ray esezantsi.
Isizukulwana esitsha yobukhulu enkulu digital tyaba panel tshin ngaphandle usifake, lo kakutsha kunye yobukhulu enkulu "17 × 17" lesilicon amorphous (ubukhulu pixel: 127 μ m kunye nokufunyanwa umfanekiso ixesha: 4 ~ imizuzwana 6) engeniswa ezipakishwe original ukusuka Korea kunye ekufezile kwinqanaba zeteknoloji ephambili kwihlabathi liphela. It has ephakamileyo uzinzo kunye nokusombulula ratio kwaye ngeempawu ezikumgangatho ophezulu, ubomi obude, ratio iindleko yokusebenza ephezulu ngaxeshanye, ngaloo ndlela ukuhlangabezana ukusetyenziswa lwezonyango kunye akhulule abantu ngaphandle amaxhala.
Kukho engundoqo umfanekiso processing technology evela HD Medical kunye window zokulungisa oluzenzekelayo, ukuncitshiswa ingxolo transmission automatic aokusetyenziswa ngomfanekiso. Umsebenzi womfanekiso processing enamandla lizisa imiphumo emihle isixhasi, ucoco, kunye nokunciphisa ingxolo.
Uluhlu Umsebenzi system Support:
Kuye imisebenzi lokuzifumanela umfanekiso, ukwanda kunye ukuncitshiswa umfanekiso, hlengiso umfanekiso ukukhanya, hlengiso umfanekiso koko, umfanekiso ujikelezo, umfanekiso flips zomlinganiselo VHS; Le umhombiso unalo umsebenzi oluzenzekelayo yogcino yokhuseleko ngokuba umfanekiso, nto leyo exhasa kwaneendlela indlela eyodwa okanye indlela ezimbini; I Dicom3.0 transmission umfanekiso, kuphando, uhlelo, ukushicilelwa kunokuzuzwa yile nkqubo. inkqubo DR uyakwazi ukulawula ulwazi umfanekiso umguli kunye;
Flat panel tshin Japan Toshiba, 17 '* 17' Amorphous Silicon (FPD) atom iodide 1 iseti
station Work: Technical computer grade, 2m HD izimvi isikali screen 1 iseti
software software Original amazwe ukuba isilwanyana 1 iseti
umandlalo Animal umandlalo No. 7, panel Ungasa ulwalathiso ezine umhlathi ityhubhu uye phezulu kwaye phantsi umbane 1 iseti
ombane High generator 220V, 320MA, 32KW 40-150kv Made in China (Neusoft uphawu) 1 PC
X ray tube yinqontsonqa: 0.6 * 1.2 Tube ombane 40-150KV. Toshiba brand 1 PC
printer ingxelo Paper ezimibalabala 1 PC
grid lokucoca Ithunyelwe JPI, 203 ucingo, igridi high zamahlathi 1 SET
Isikrini esibanjwayo HD Medical 1 PC
station umsebenzi Post-processing Computer nge software 1 SET
Sibona Remote 3KW UPS powder, ungahambisa phezulu naphantsi.
ibhokisi tool HD Medical 1 SET
cable ombane aphezulu 75KV 2PCS
Power cable 3wires ababini kwisigaba 1 PC
Power sesimangalo: Yenziwe etshayina 1 SET
abanye Ukupakisha ibhokisi, wire umhlaba 1 SET
Previous: KPET DR6000J Vet pet lwezilwanyana isilwanyana yedijithali ray X ray system DR umfanekiso
Next: KPET DR6500J Vet pet lwezilwanyana isilwanyana yedijithali ray X inkqubo isixhobo DR ray
Analog High Umgangatho Veterinary X Ray Machine
Digital ray Veterinary X-Ray Izixhobo
Digital X Ray Machine yeMfuyo Price
Hot Ukuthengisa Veterinary Digital ray
ray Veterinary X -Ray Equipment
Ray Veterinary Digital ray System
Veterinary Diagnostic Yomfanekiso Table
Panel Flat detector zeMfuyo
Veterinary Yomfanekiso Equipment
Veterinary Tabel Kuba X-Ray
KPET DR4500 pet yezilwanyana Veterinary digital radio receiver ...
KPET DR6000J Vet pet kwezilwanyana animal yedijithali ...
KPET DR5500J Veterinary pet yezilwanyana Radu yedijithali ...
KPET DR4500J Veterinary pet yezilwanyana Radu yedijithali ...